कक्षा १२को परीक्षाबारे शिक्षा मन्त्रालयको आएन कुनै ठोस अभिव्यक्ति ; अन्योलमा पौने चार लाख विद्यार्थी – Padhnekura
परीक्षाबारे शिक्षा मन्त्रालय अनिर्णीत, अन्योलमा विद्यार्थी र अभिभावक, अनलाइनबाट परीक्षा लिन सक्ने अवस्था छैन, कोभिड संक्रमण बढे भौतिक रूपमा लिन पनि समस्या
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले साउन तेस्रो सातादेखि कक्षा १२ को परीक्षा भौतिक रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी शिक्षा मन्त्रालय हुँदै कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी)मा पठाएको थियो । कोभिड संक्रमण कम भएको समयमा भौतिक रूपमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारीका साथ बोर्डले दुई हप्ताअघि प्रस्ताव पठाए पनि निर्णय नहुँदा पौने चार लाख विद्यार्थी र तिनका अभिभावकमा चिन्ता बढेको हो ।
कोभिड संक्रमण घटेकाले साउनको तेस्रो साता परीक्षाको उपयुक्त समय थियो, तर निर्णय नहुँदा समस्या भयो । परीक्षा सञ्चालनको निर्णयमा ढिलाइ हुँदा पुनः संक्रमण बढेर अवस्था बिग्रिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । अब दसैँअघि कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक गर्ने हाम्रो लक्ष्य पनि पूरा नहुने भयो ।
प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेल
अध्यक्ष, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड
गत वैशाखमा सिसिएमसीले परीक्षा स्थगितको निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म त्यसबारे निर्णय गर्न सकेको छैन । सिसिएमसीले चिकित्सा शिक्षाका स्नातक तहका कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षाका लागि भने अनुमति दिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले कक्षा १२ को परीक्षाबारे निर्णय गर्न सिसिएमसीमा प्रस्ताव गरेको, तर अहिलेसम्म कुनै निर्णय नआएको बताए । चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिने परीक्षाले कक्षा १२ को परीक्षाको आधार बन्ने उनको भनाइ छ ।
बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा दिने तीन लाख ७४ हजार विद्यार्थीको नाम इन्ट्री गरेको छ । बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलले कोभिड संक्रमण कम भएको समयमा परीक्षा सञ्चालनको तयारी गरे पनि निर्णयमा ढिलाइ हुँदा पुनः संक्रमण बढेर अवस्था बिग्रिनेमा चिन्ता बढेको बताए । ‘कोभिड संक्रमण घटेकाले साउनको तेस्रो साता परीक्षाको उपयुक्त समय थियो, तर निर्णय नहुँदा समस्या भयो,’ पौडेलले भने, ‘अब दसैँअघि कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक गर्ने हाम्रो लक्ष्य पनि पूरा नहुने भयो ।’
परीक्षा सञ्चालनका लागि कम्तीमा तीन हप्ताको समय चाहिने अध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ । कतै बाढी, पहिरोलगायतका कारण तयारीमा केही समय लाग्ने उनले बताए । बोर्डले पठाएको प्रस्ताव सिसिएमसीमा पुगेको छ । सिसिएमसीले परीक्षाको प्रक्रियाका बारेमा बोर्डसँग केही जिज्ञासा राखेको र त्यसका विषयमा बोर्डले जवाफसमेत पठाएको थियो । तर, पनि सिसिएमसीले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।
कक्षा १२ को नतिजापछि मात्र उच्च शिक्षा अध्ययनको ढोका खुल्छ । अभिभावक महासंघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले कक्षा १२ को परीक्षा तत्काल तालिका सार्वजनिक हुनुपर्ने बताए । माथिल्लो तहको भर्ना गर्ने बाटो खुल्ने र देश तथा विदेशमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थी रहेकाले छिट्टै निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विद्यार्थी र अभिभावक चिन्तामा छन्, कक्षा १२ को परीक्षा तत्काल गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।
अब कक्षा १२ को परीक्षा सय पूर्णांककै
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा भौतिक रूपमा सञ्चालनको प्रस्ताव गरेको छ । पौने चार लाख विद्यार्थीको परीक्षा अनलाइन वा अन्य विकल्पबाट सम्भव नभएको अध्यक्ष पौडेलले बताए । यो वर्ष हरेक विषयमा शतप्रतिशत नै परीक्षा लिने तयारी गरेको छ । अघिल्लो वर्ष समय र भारसमेत घटाएको थियो । बोर्डले ४० प्रतिशत मूल्यांकनका लागि परीक्षा लिएको थियो । त्यसैगरी, ४० प्रतिशत मूल्यांकन कक्षा ११ को नतिजाका आधारमा लिइने र २० प्रतिशत आन्तरिक मूल्यांकनको निर्णय गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष देशभरका चार हजार एक सय पाँच परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो । सो संख्यामध्ये ६ सय १७ केन्द्रमा प्रश्नपत्र छपाइ गरी पु¥याएको छ भने अन्य केन्द्रमा इमेलमार्फत प्रश्नपत्र पठाएको छ । कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी हुने सबै विद्यालयमा होमसेन्टर कायम गरेको थियो ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगदेखि विश्वविद्यालयसम्मले लिन थाले परीक्षा
कोभिडको संक्रमण कम भएसँगै विभिन्न तहका परीक्षा धमाधम सञ्चालन हुँदै छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भौतिक रूपमै परीक्षा सञ्चालनको तयारी गरेको छ । धेरै विद्यार्थी संख्या रहेको तीन र चारवर्षे बिएस्सी, बिबिएस, बिएड र बिए प्रथम वर्षको परीक्षा ११ साउनदेखि लिने तालिका सार्वजनिक गरेको छ । त्यसैगरी, कोभिडका कारण गत १३ वैशाखपछि स्थगित भएका परीक्षा ५ साउनदेखि सञ्चालन हुने तालिका सार्वजनिक गरेको छ । फाराम भरेको झन्डै दुई वर्षसम्म पनि प्रथम वर्षको परीक्षा दिन नपाएका साढे दुई लाख विद्यार्थी छन् । एउटा तह नै पार गर्नुपर्ने वेलामा प्रथम वर्षकै परीक्षा दिन नपाएकामा विद्यार्थी निराश र चिन्तित बन्न थालेका छन् ।
स्नातक तह दोस्रो वर्षको परीक्षा भइरहेको अवस्थामा कोभिड संक्रमण बढेपछि परीक्षा स्थगित भएको थियो । दोस्रो वर्षका बाँकी विषयको परीक्षा प्रथम वर्षको भन्दा पहिले नै ५ साउनबाट सुरु गर्ने त्रिविको तयारी छ । एउटै तहको एउटै वर्षमा पनि संकायअनुसारको अवस्था फरक छ । स्नातक तहमा व्यवस्थापन संकायको दोस्रो वर्षको परीक्षा सकिएको छ भने अन्य संकायका केही विषय बाँकी छन् । मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायका २७ विषयमध्ये चार विषयको परीक्षा बाँकी छ । त्यसैगरी, विज्ञानका तीन र शिक्षाशास्त्रका नियमिततर्फ एक तथा मौकातर्फका तीन विषय बाँकी छन् । अधिकांश विद्यार्थीका एक–एक विषय मात्र परीक्षा दिन बाँकी छ । सेमेस्टरतर्फका पनि परीक्षाको तयारी भएर स्थगित भएका थिए ।
त्रिविले १७ वैशाखदेखि स्नातकोत्तर तह तेस्रो सेमेस्टरका परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सिसिएमसीको १२ वैशाखको निर्णयअनुसार परीक्षा स्थगित भएका थिए । कोरोना भाइरस तीव्र रूपमा फैलिएपछि सिसिएमसीले सञ्चालन भइरहेका सबै परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो । चिकित्सा शिक्षा आयोगले पहिलोपटक चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षा लिँदै छ । काठमाडौं उपत्यकासहित धरान, चितवन, पोखरा र नेपालगन्जमा समेत एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने भएको छ । कोभिडका कारण जोखिम कम गर्ने उद्देश्यले आयोगले यस वर्ष उपत्यकाबाहिरसमेत परीक्षा केन्द्र कायम गरेको छ । जेठ दोस्रो सातादेखि एकीकृत प्रवेश परीक्षा लिने तयारी गरे पनि कोभिडको संक्रमण उच्चदरले फैलिएपछि अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको थियो । स्थगित प्रवेश परीक्षा आगामी ९ देखि १३ साउनसम्म सञ्चालन हुँदै छ ।
यो पढ़नेकुरा समाचार नयाँपत्रिकाका लागि भवानीश्वर गौतमले लेखेका हुन्।
Previous काठमाण्डौ महानगरपालिकाको प्रश्न (एसईई) नतिजा नआउदै भर्ना गर्ने छुट कस्ले दियो ?
Next २/३ दिनमै मन्त्रालय भागबण्डा मिल्ने , देउवा समर्थक दलहरु बिचको सहमति कायमै